•	Accountant ဆီမှတက်လာသော General Ledger နှင့် Cash Flow ကိုအသေးစိတ်ပြန်စီစစ်ပေးပြီး Chief Accountant သို့ပေးပို့ရန်။
•	Cash Book နှင့် General Ledger မှတဆင့် Trial Balance,Profit & Loss နှင့် Balance Sheet စသော (Financial Report) အထိ Chief Accountant ၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လစဉ်ေ၇းဆွဲပေးရန်။
•	လစဉ် ငွေလက်ကျန်၊ ဘဏ်လက်ကျန်များအားလုံးကို စာရင်းကိုက်/မကိုက် ပြန်စစ်ပေးရန်။
•	လုပ်ငန်း၏ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်း (Fixed Asset)များအားခေါင်းစဉ်ခွဲပြီး Registered စာရင်းပြုစုရန်။
•	ရရန်ရှိ (Receivable) နှင့် ပေးရန်ရှိ (Payable)စာရင်းများအားလုံးကို Confirm လုပ်ပြီး Chief Accountant သို့သီးခြားစုစည်းပေးရန်။
•	လုပ်ငန်းမှကြိုတင်ထုတ်ငွေ (Advance) များအားသတ်မှတ်ထားသောရက်အတွင်း စာရင်းပြန်ရှင်း/မရှင်းစစ်ဆေးရန်။
•	နေ့စဉ်အရောင်း(သို့)၀င်ငွေစာရင်းများ၊ Cost of Sale များအားလစဉ်စစ်ဆေးပြီးစာရင်းသွင်းရန်။
•	Closing Stock လက်ကျန်များအား မြေပြင်စာရင်း(Ground Balance)နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိလစဉ်
•	စစ်ဆေးပြီး စာရင်းသွင်းရန်။
•	ကုန်ဝယ်အကြွေးများရှိပါက ပေးချေရမည့်ရက်စွဲနှင့် ၊ အရစ်ကျပေးချေမှုမျိုးဖြစ်ပါက သတ်မှတ်ကာလ
နှင့်သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏများမှန်/မမှန် ကြည့်ပြီးစာရင်းသွင်းရန်။
•	Accountant နှင့် Junior Accountant မျာအား Supervision ပြုလုပ်ပြီး၊ Chief Accountant အား
-ဘွဲ့တခုခုရရှိပြီး ၊ B.Com (or) LCCI Level-(III)
-စာရင်းနှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(5) နှစ်ရှိရမည်
-စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သတ်သောအခြား Diploma တခုခု ရရှိထားလျင်ပိုအဆင်ပြေပါသည်။(ဥပမာ IFRS)
–Microsoft Word/Excel ကျွမ်းကျင်ရမည်။
-Accounting Software တခုခုကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
-Advance Excel ပါသုံးနိုင်လျင်ပိုအဆင်ပြေသည်။
Aung Naing Thitsar(ANT) was formed in 2003 by Mr Aung Zaw Oo and the company started with trading and exporting agricultural products, primarily rice, bean, corn and sesame. The company's headquarters are in Yangon and it has developedavery large international export network in Europe, the Middle East and Asia.
Asaresult of endeavour and consistency in business conduction for more than ten years, the company has expanded operations with two rice mills in Myanmar and also intends to continue to expand and enter additional international markets. Not only milling the ordinary long grain rice with the most advanced technology in our production lines but also we produce parboiled rice which attractsadifferent set of customers from all over the world.